Xigasho: Maamulka Banaadir wuxuu shaqada ka joojiyay 21 qof oo u badan beel - Axadle | Axadle
Muqdisho (Axadle) – Axadle ayaa ogaatay in Maamulka Gobolka Banaadir uu shaqada ka joojiyay 21 ka mid ah shaqaalaha Gobolka Banaadir, lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa shaqo ka joojinta.
Saraakiisha ku meel gaarka ah waxaa ka mid ah la taliyayaal, agaasimayaal, ku xigeeno iyo madax waaxeedyo, kuwaas oo ugu dambeyn loo diiday inay galaan xarunta gobolka Banaadir, sidoo kale ma jiro masuul ka jawaabaya cabashadooda ku saabsan xil ka qaadista.
Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in kuwa shaqada laga eryay ay diirada saareen khilaafaadka maamulka madaxweyne Farmaajo, halka qaarkoodna diirada lagu saaray caburinta kuwa kasoo horjeeda dowlada Soomaaliya.
Inta badan dadka shaqada laga eryay waxaa hogaaminayay Axmed Iimaan iyo Ibraahim Dheere oo ah labo kuxigeen gudoomiye maaliyadeed oo kasoo laabtay gobolka Banaadir haatana la shaqeeya Xasan Cali Kheyre oo ay qaraabo yihiin.
Dhawr qof ayaa sidoo kale laga reebay liiska shaqo joojinta uu sameeyay Xildhibaan Mahad Salaad, kadib markii uu damaanad siiyay wiil uu adeer u yahay Cali Yare Cali.
Go’aanka shaqada looga eryay ayaa waxaa iska kaashaday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo labadiisa ku xigeen ee amniga iyo maaliyada iyo xubno ka tirsan Villa Somalia.